Claudine Razaimamonjy: Nohamarin’ny SMM fa mbola ao amin’ny HJRA
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Claudine Razaimamonjy: Nohamarin’ny SMM fa mbola ao amin’ny HJRA
Rechercher Valider	Claudine Razaimamonjy: Nohamarin’ny SMM fa mbola ao amin’ny HJRA	Imprimer	Nidina teny amin’ny hopitaly HJRA ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Erinaivo, omaly maraina, tokony ho tamin’ny 11 ora. Ity mpitsara ity izay tonga nanamarina raha mbola ao amin’io hopitaly io na tsia i Claudine Razaimamonjy. Nandeha mantsy ny feo tamin’ny alatsinainy teo fa tsy ao intsony ny voapanga rehefa nahazo fahafahana vonjimaika tamin’ny fomba antsokosoko. Nohamafisin’ny filohan’ny SMM nandritra izay fidinana teny amin’ny hopitaly HJRA izay fa mbola tsaboina eny an-toerana ny voapanga ary tsy miova ny efitrano fa mbola ao amin’ny laharana faha 126. Ny tonia mpampanoa lalàna moa no naniraka ny filohan’ny SMM hanatanteraka an’izay fanamarinana izay, na ilay ambara amin’ny fiteny frantsay hoe “Controle des prisons”. Marihana fa ny alin’ny alatsinainy teo no efa tonga teny amin’ny HJRA ny mpitsara Fanirisoa Erinaivo, saika hamita an’izay iraky ny fampanoavana izay saingy nosakanan’ny talen’ny hopitaly. Navela nanao ny asany mamalaka kosa anefa izy rehefa niverina omaly maraina. Raha ny fanazavana nomen’ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara dia nosaromana lamba ny lohan’i Claudine Razaimamonjy tamin’ny fotoana nidirany tao amin’ny efitrano hitsaboina azy. Saika tsy nesorina mihitsy aza io lamba io saingy nandefitra ihany ny farany ireo tompon’andraikitra tao amin’ny hopitaly rehefa tsy nanaiky ny filohan’ny SMM. Tsiahivina ihany fa nangataka fahafahana vonjimaika ho an’ity mpanolontsaina manokan’ny filoham-pirenena ity ny mpisolovavany tamin’ny alatsinainy teo, mbola tsy nisy valiny aloha izany fangatahana izany hatramin’ny alina teo. F.Tsihiavonana